6 cunno oo maskaxdaada kobciya caafimaadkeeda – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka 6 cunno oo maskaxdaada kobciya caafimaadkeeda
Cunnooyinka ay bini aadamku cunaan waxay door muhiim ah ka ciyaaraan maskaxda maskaxda, gaar ahaan maadaama maskaxdu tahay xarunta kantaroolka jirka waxayna mas’uul ka tahay haynta garaaca wadnahaaga iyo sambabbadaada neefsashada waxayna kuu oggolaaneysaa inaad dhaqdhaqaaqdo, dareemto oo fekerid.
Sidaa daraadeed doorashada cuntooyinka si kor loogu qaado waxqabadka maskaxda iyo joogteynta caafimaadkiisa, gaar ahaan xusuusta iyo uruurinta, waxaan halkaan ku eegeynaa 6 ka mid ah, sida ku xusan bogga “Standard Media”.
Labada maaddooyinka ugu waaweyn ee kafee, kafeeka iyo antioxidant-ka, ayaa maskaxda ka caawiya. Caffeinku wuxuu kordhiyaa feejignaanta, wuxuu wanaajiyaa niyadda wuxuuna xoojiyaa diiradda aad u daran.
Daraasad ayaa lagu ogaadey in kuwa cabba qaxwaha aroorta ama qaddar yar maalintii oo dhan ay wax ku ool u yihiin howlaha u baahan feejignaanta.
Cabbitaanka qaxwada muddada-dheer wuxuu la xiriiraa halista hoose ee cudurada neerfaha, sida Parkinson’s iyo Alzheimer.
Curcumin, oo ah maadada firfircoon ee turmeric, ayaa la tusay inay ka gudubto caqabad dhiig-maskaxda ah, taasoo la micno ah inay maskaxda si toos ah u gali karto ugana faa’iidaysan karto unugyada. Waa sunta lidka ku ah antioxidant iyo xarunta ka hortagga bararka.
Curcumin wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista xusuusta bukaannada Alzheimer, wuxuu yareeyaa niyad-jabka wuxuuna sare u qaadaa serotonin iyo dopamine, oo hagaajiya niyadda.
Curcumin wuxuu door weyn ka ciyaaraa dhismaha unugyada maskaxda ee cusub wuxuuna kobciyaa nafaqada maskaxda ka dhasha.
Broccoli waxaa ka buuxa xeryahooda xoog leh, oo ay ku jiraan antioxidants, sidoo kale waxay ka kooban tahay waxyaabo aad u sarreeya oo fiitamiin (K) ah, maaddaama qofku uu heli karo qaddarka lagu taliyay ee maalin kasta ah illaa 91 garaam oo broccoli.
Fiitamiinkan dufanka leh ee nafaqada leh waxay muhiim u tahay sameynta spongolipids, nooc dufan ah oo ay si buuxda isuguxiran yihiin unugyada maskaxda.
Ka sokow fiitamiin K, broccoli waxa ku jira tiro xeryo ah oo ka dhigaya anti-bararka iyo ka hortagga ‘oxidative’, oo laga yaabo inay ka caawiso ka ilaalinta maskaxda dhaawac.
Seeds of bocorka
Abuurka Pumpkin wuxuu kakooban yahay antioxidant awood leh, oo jirka iyo maskaxda ka ilaaliya waxyeelada xag-jirka ah. Sidoo kale waa il wanaagsan oo magnesium, bir, zinc iyo naxaas ah.
Zinc waa qeyb ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah calaamadaha dareemeyaasha, iyo magnesium-ka ayaa muhiim u ah barashada iyo xusuusta. Yaraanta macdanta birta waxay inta badan la xiriirtaa shaqada maskaxda oo daciifa.
Waad heli kartaa fitamiin C lagama maarmaanka ah maalin kasta adiga oo cuna hal kiniin oo oranjo dhexdhexaad ah, fiitamiinkani waa cunsurka ugu weyn ee ka hortaga sii xumaanshaha maskaxda ee la xidhiidha gabowga iyo cudurka Alzheimer.
Fiitamiin C waa antioxidant awood leh, kaas oo ka caawiya la dagaallanka xagjirnimada lacag la’aan ah oo dhaawici kara unugyada maskaxda isla markaana taageeri kara caafimaadkooda markay weynaadaan.
Xaddi aad u wanaagsan oo fiitamiin C ah ayaa sidoo kale laga heli karaa basbaaska macaan, guava, kiwi, yaanyada iyo caleemaha.
Kalluun dufan leh
Kalluunka dufanka badan waxay badanaa ku badan yihiin liiska nafaqada nafaqada leh ee maskaxda, oo ay ku jiraan salmon, kalluunka kalluunka (sardines) iyo sardines, dhammaantoodna hodan ku ah asiidh dufan leh omega-3.
Dufanka ayaa ka kooban 60 boqolkiiba dufanka, badh ka mid ah kuwan dufanka omega-3, ee maskaxdu u isticmaasho dhisida maskaxda iyo unugyada dareemeyaasha.
Previous articleFaa’iidooyinka Basbaaska cas ee aadan ogeyn
Next articleDaraasad Cusub oo Ka Digeysa Adeegsiga Carfisooyinka Sunta Ah